Olee otú Download Online Videos na a Mactubes Alternative
Mactubes Alternative: Download Online Video mma karịa Mactubes
> Resource> Mac> Mactubes Alternative: Download Online Video mma karịa Mactubes
1,12 Torrent Movie Downloader
1,13 Torrent Video Downloader
Ma gụọ 2.3 iLivid maka Mac
YouTube nwuchi 2.4 maka Mac
2.5 Mactubes maka Windows
2,10 Clipnabber Alternative
2,13 Clipgrab Alternative
2,14 MP3 Roket Alternative
2,15 Mactubes Alternative
2,16 Video Download Capture Alternative:
2,17 Get tube Alternative
Ọ bụrụ na ị bụ onye na Mac onye ọrụ, mgbe ahụ, ị ​​ga-maara nke ọma ihe dị iche iche video Downloaders dị gị. The dị iche iche software na ahịa na-eme ka ọ na-esiri ekpebi nke otu ịhọrọ. Otu n'ime ndị kasị nkịtị software usoro eji bụ MacTubes. MacTubes bụ a YouTube video Downloader, na e ọma ahuta ruo ọtụtụ afọ ugbu a. Otú ọ dị, ọ dịghị nwere ọtụtụ na-agaghị emeli - n'ihi na a mmalite, ọ pụrụ nanị arụ ọrụ na YouTube. Ọ dịghị enye ndakọrịta na ndị ọzọ video-enyi na enyi weebụsaịtị, nke pụtara na ị na-ezi ejedebeghị ebe i nwere ike na-esi gị isi iyi videos si.
E nwere, n'ezie, uzo ozo si n'ebe. Ma dị ka anyị kwuru n'elu - olee otú ị na-ahọrọ na nke ukwuu oke na ahịa? The Mac usoro mgbe nile nnọọ media arọ, n'ihi ya, ọ na-eme uche nwere nnukwu oke maka software. Otú ọ dị, anyị ukwuu nwere ike ikwu na ị na-lelee Wondershare AllMyTube for Mac. Wondershare Awade a nnukwu ego nke amara atụmatụ, ọ bụghị dịghị ndakọrịta na ihe karịrị otu narị dị iche iche nnukwu-aha media weebụsaịtị. Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe ndị magburu onwe MacTubes ọzọ, mgbe ahụ, ị dị nnọọ hụrụ ya! Ị nwere ike na-amalite nbudata a software ugbu a. Ọ na-ewe bụ ihe dị mfe nwụnye usoro!
Ihe nke a Mactubes Alternative karịrị echiche
Mgbe enwe iji wụnye ụfọdụ software ime ihe ọ bụla nwere ike ịbụ ntakịrị ihe nke a chore - nakwa dị ka nwere ize ndụ - ọ dịghị ihe na-echegbu onwe banyere na nke a MacTubes ọzọ. Ọ bụ kpam kpam nchebe, na ụlọ ọrụ nke aghụghọ ọ ka nwere ihe kemgwucha nti aha ofụri web. Ebe a bụ nanị ụfọdụ n'ime ihe ndị mere na i kwesịrị ịtụle-agbanwe site MacTubes ka AllMyTube for Mac.
Ngwa ngwa download videos si n'ebe niile weebụ na ihe dị mfe na-jikwaa interface
Họrọ si karịrị 100 weebụsaịtị nke nwere ike inye gị na elu àgwà media - na-gị ghota si kasị mma
Tọghata ọ bụla na-ewu ewu video faịlụ ka zuru okè dabara gị mobile ngwaọrụ dị ka ihe iPad ma ọ bụ onye iPhone
Were audio naanị site a video faịlụ, na-azọpụta gị ohere na ike gị-mbanye ọ bụrụ na ị chọrọ naanị ma ọ bụ mkpa ọdịyo
-Arụ ọrụ niile na-ewu ewu Mac nchọgharị ka Safari, ma na-akwado OS X 10,9 Mavericks
Olee otú Jiri Wondershare AllMyTube for Mac ka Download Videos
Lee ndị dị mfe nzọụkwụ ị pụrụ ịgbaso ibudata vidiyo si na online saịtị dị ka YouTube.
Nzọụkwụ 1 Chọta video
Ị nwere ike ịnweta nnọọ ihe ọ bụla video-amasị gị na-eji AllMyTube. Na ihe karịrị otu narị weebụsaịtị n'akụkụ YouTube n'ụzọ zuru ezu na-akwado, ị kwesịrị ị na-enweghị nsogbu na-achọta a video ị ga-achọ ka download.
Cheta na: Ị ga-enweta ohere ọkacha mmasị gị vidiyo na Safari, Firefox ma ọ bụ Chrome.
Nzọụkwụ 2 Download gị vidoes
Ka ibudata a video, nanị hover n'elu-nri akuku nke video onwe ya na obere Download button kwesịrị egosi. Pịa bọtịnụ na programmụ a ga-amalite ibudata video.
Alternatively, i nwere ike idetuo URL nke video na mgbe ọkụkụ Paste URL button, a usoro ga-amalite ibudata video ozugbo.
Cheta na: Ị nwere ike tinye dị ka ọtụtụ vidiyo ka ị na-amasị gị kwụ n'ahịrị. Nke a na usoro ike ibudata ruo 10 videos n'out oge.
Nzọụkwụ 3 tọghata gị video
Ozugbo videos na-ebudatara, ị nwere ike ahụ na-ele ha ka ị na-atọ ya ụtọ. Otú ọ dị, ọ bụghị ihe niile ebudatara videos na-aga n'otu ntabi dakọtara na mkpanaka gị na ngwaọrụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ndị a ebudatara videos ma ọ bụ ọdịyo na-eso unu, ị ga-mkpa iji tọghata ha mbụ. Iji mee nke a, nanị gaa Na n'ọbá akwụkwọ n'ime AllMyTube, na pịa tọghata bọtịnụ na nri-n'akụkụ aka nke ọ bụla video depụtara. Ị ga-ahụ ga jụrụ ịhọrọ a kwesịrị ekwesị format maka ngwaọrụ gị na pịa OK na-amalite converting.
Ozugbo a usoro-agwụ agwụ, ị ga-enwe na-enwe gị videos n'ebe ọ bụla ị na-amasị site na gị ngwaọrụ mkpanaaka. Olee otú mfe bụ nke ahụ? Ihe niile ị chọrọ ime bụ pịa ole na ole buttons bụrụkwa na i nwere integrated, n'ụzọ zuru ezu usable video Downloader! Ntak-aga n'ihu ma na-agbalị a na-ghar ngwá ọrụ taa?
iLivid Alternative: Download Online Video mma karịa iLivid
Tubebox maka Mac: Download Online Video na One Pịa (Yosemite gụnyere)
Clipgrab maka Mac: Download Online Video na One Pịa (Yosemite gụnyere)
Olee otú Mbido Android ADB on Mac effortlessly
iPhone ka Mac Atụmatụ Center
Native Instruments: Traktor Pro maka Mac
5 Ụzọ weghara a nseta ihuenyo na Mac OS X (El Capitan)
Download Best Real Downloader maka Mac Alternative
Download Best Format Factory maka Mac (Yosemite gụnyere)